Arco Linux Kuisa Nongedzo, YeNewbies | Linux Vakapindwa muropa
Si iwe uri mumwe wevaya vanoda kuedza Arch Linux uye usatya nekuti maitiro ekumisikidza akaomarara kana zvakapusa unotya kumonyorodza uye nekuparadza ruzivo pane diski yako, Usanetseke, Arco Linux ndiyo yakanakisa sarudzo saka unogona kuedza mabhenefiti eArch Linux.
Uye ndosaka mu Ichi chinyorwa ini ndinogovana nyore gwara rekuti ungaisa sei Arco Linux yakagadzirirwa avo vatsva vanoda kuyedza Arch Linux pasina kunetseka. Kune avo vanhu vasati vaziva kugoverwa kweLinux ini ndinogona kukuudza izvozvo ArcoLinux (yaimbova ArchMerge) iri kugovera kweLinux kunoenderana neArch Linux.
Iyo ArcoLinux chirongwa ine zvinyorwa zviviri, pakati pe iyo inosanganisira iyo Xfce, Openbox uye i3 desktop mamiriro.
Chinyorwa chechipiri ipuratifomu shoma, iyo inongotiisa isu pamutsetse wekuraira, uko iko kusarudzika kwekugovera kuri patiri.
Uchishandisa iyi modhi ArcoLinux inotarisana nekuve kugoverwa kweLinux iyo inzvimbo yekudzidza kune avo vese vashandisi vese vatsva kuLinux, pamwe neavhareji vashandisi.
Iyo iri yemahara inoshanda sisitimu, yakavakirwa paArch Linux, ino sisitimu zvakare inoshandisa yekuvandudza modhi inonzi Rolling Kuburitswa, saka isu tinongoita kumisikidza kumwe chete uye kubva ipapo zvichienda ivo vanongova matsva akachena, nekudaro vachisiya iwo maBhaibheri, sezvazvinowanzo Ubuntu semuenzaniso (Ubuntu 18.04, Ubuntu 19.04, nezvimwewo)
Pasina imwezve ado, ngatifambei tichienda kunongedzo.
1 Dhawunirodha uye gadzirira iyo yekuisa midhiya
1.1 CD / DVD yekuisa midhiya
1.2 USB yekumisikidza svikiro
2 Maitiro ekuisa Arco Linux
2.2 Marongerwo ekhibhodi
2.3 Sarudza nzira yekuisa.
2.4 Mushandisi uye password
Dhawunirodha uye gadzirira iyo yekuisa midhiya
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kurodha pasi mufananidzo mufananidzo uye wochinjisa kune CD / DVD kana USB drive, tinoitora kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti. chinongedzo apa.
Kana izvi zvangoitwa tinopfuurira nekugadzirwa kwenzvimbo yekuisa.
CD / DVD yekuisa midhiya
Windows: Tinogona kupisa iyo iso neImgburn, UltraISO, Nero kana chero imwe chirongwa kunyangwe vasina ivo muWindows 7 uye gare gare inotipa sarudzo yekukiya kurudyi paIO.
Linux: Vanogona kushandisa kunyanya iyo inouya nemifananidzo yakajeka, pakati pavo iri, Brasero, k3b, uye Xfburn.
USB yekumisikidza svikiro
Windows: Ivo vanogona kushandisa Universal USB Installer, LinuxLive USB Musiki, Etcher, pakati pevamwe, izvi zviri nyore kushandisa.
Linux: Sarudzo yakakurudzirwa ndeye kushandisa dd rairo, iyo yatinotsanangudza munzira ipi iyo isu tine iyo Arco Linux mufananidzo uye zvakare mune iyo gomo poindi yatinayo usb yedu:
Maitiro ekuisa Arco Linux
Kana iyo system yabviswa, isu tichaenderera nekumisikidza Arco Linux, chinhu chekutanga chichava kuvhura iyo inosimudza iyo inogona kuwanikwa mu "Arco Linux" menyu, apa unogona kutsvaga "ArcoLinux Installer" mukati mebrowser kana mune menyu menyu.
Waita izvi Iyo yekuisa wizard ichavhura, iyo pachiratidziro chekutanga ichatikumbira isu kusarudza mutauro kwandiri zvichava muchiSpanish kubva kuMexico. Kana izvi zvangoitwa, tinobaya pane rinotevera bhatani iro riri muchikamu chezasi chekuruboshwe chehwindo.
Iye zvino zvichatikumbira kwedu nzvimbo pamwe nenzvimbo yenguva, iyo ichagadziriswa musystem kuratidza nguva yenzvimbo iyoyo.
Isu tinogona zvakare kuona maviri sarudzo pazasi payo, unova mutauro (wakambosimbiswa)
Ipapo tinobaya zvinotevera.
Zvino nekukurumidza mumashure izvo zvinotikumbira kuti tivimbise kugoverwa kwekhibhodi yedu, iyo inowanzoonekwa nehurongwa, asi kana isiri iyo inoratidzwa pachiratidziri, unogona kuitsvaga mukati mekasarudzo.
Sarudza nzira yekuisa.
Zvino nekukurumidza mumashure izvo zvichatibvunza isu nzira iyo Arco Linux ichaiswa pakombuta yedu, pano isu tinofanira kuita basa
Mune yangu nyaya, ndiri kuzodzima iyo partition kwandaive ndakaisa Ubuntu 18.04 uye ini ndichaigovera iyo imwecheteyo iyo yakagadzirirwa Swap, saka ini handigadzirise iyo chikamu uye ndigoisa zvimwe zvikamu.
Kudzima, kuwedzera kana kugadzirisa zvikamu isu tine sarudzo pazasi petafura. Kune rimwe divi, kana isu tine anopfuura rimwe dhisiki rakaomarara pakombuta uye haisi iyo yatiri kuzoshandisa yeArco Linux, kumusoro kuri «Midziyo yekuchengetedza»Uye ipapo tinotsvaga rakaomarara diski uko Arco ichaiswa uye inozotakura zvikamu zveiyo disk.
Kana zviri zvezvikamu zvekugadzira, yakapusa kungosarudza chidimbu uko Arco Linux ichave uye isu tinochipa iyo yepamusoro poindi «/» ine «ext4» faira fomati uye ndizvozvo.
Kana iwe uchida kuiswa kwakasarudzika, iwe unogona kugovera chikamu chega chega pegomo chaunoda icho zvakasiyana, kureva "bhuti" "kumba" "mudzi" "chinja" nezvimwe.
Chekupedzisira, pazasi, isu tinogona kusarudza pane iyo disk iyo "grub" ichaiswa.
Kana izvi zvangoitwa, tinodzvanya pane inotevera.
Mushandisi uye password
Nhanho yekupedzisira kugadzira mushandisi weiyo system uye nekupa password iyo yatinofanira kurangarira, nekuti iro password iro ratichapinda naro muchirongwa uye nezvedu isu tichashanda mune terminal.
Kana iwe uchida kugadzira vamwe vashandisi, unogona kuzviita mushure mekumisikidzwa. Kana izvi zvangoitwa, tinodzvanya pane inotevera.
Iwindo iri rekupedzisira rinotiratidza masisitimu atinoratidza ekuisirwa kweArco Linux uye pamusoro pezvose kuitira kuti iwe uzive zvauri kuita muzvikamu zvehard disk yako. Sezvo zvichiratidza shanduko muzvikamu uye / kana disks.
Kana tangova nechokwadi nezvatichaita, tinobaya kuisa uye tinofanirwa kumirira maitiro ekumisikidza kuti apedze kuti tinakirwe nesystem yedu nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Arco Linux Kuisa Nongedzo, YeNewbies
Kunyangwe iye Francisco haana kuponeswa kubva kune zvikanganiso zvevagadziri